SEO နှင့် SEM - သင်၏စီးပွားရေးကျန်းမာရေးအတွက် SEO နှင့် SEM နှစ်ခုလုံးကိုနားလည်ရန်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။ - Semalt ကျွမ်းကျင်သူအကြံဥာဏ်
SEO နှင့် SEM အကြားခြားနားချက်အတိအကျကားအဘယ်နည်း။ သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ဤမဟာဗျူဟာများသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။ အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက်သင့်အတွက်ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။ SEO နှင့် SEM အသုံးပြုရာတွင်မည်သည့်ကိရိယာများကသင့်ကိုကူညီနိုင်သနည်း။ ပါဝင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကဘာတွေလဲ။ သင်ကုမ္ပဏီအတွင်း၌ဤကွန်ယက်ဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများကိုစီမံသင့်သလား။ ဤမေးခွန်းများသည်ဤဆောင်းပါးကသင့်အားဖြေဆိုရန်ကူညီမည့်မေးခွန်းများဖြစ်သည်။
SEO နှင့် SEM အကြားခြားနားချက်ကိုနားလည်ခြင်း
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်သောအခါ SEO နှင့် SEM အကြောင်းကြားဖူးသည်။ စနစ်တကျမဟာဗျူဟာတွင်အတူတကွပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းသည်သင်၏အွန်လိုင်းတည်ရှိမှုနှင့်အကျိုးဆက်အားဖြင့်သင်၏ဝင်ငွေများကိုပိုမိုခိုင်မာစေရာတွင်အလွန်ထိရောက်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတိအကျရည်ညွှန်းနေသည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ SEO အေဂျင်စီကသင့်အားဤသတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုပေးလိမ့်မည်။
SEO (Search Engine Optimization) နှင့် SEM (Search Engine Marketing) တို့၏ကွာခြားချက်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ မည်သည့်အရင်းအမြစ်များနှင့်မည်သည့်ဘတ်ဂျက်ကိုမည်သည့်ဘတ်ဂျက်ကိုစျေးကွက်သို့ဖြန့်ချိမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုရွေးချယ်ခြင်းဆိုသည်မှာကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုအတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်လွယ်ကူစွာညွှန်းကိန်းများဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာတိုင်းကိုထည့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့် SEO သည်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၏ရလဒ်များကိုအဓိကထားသည်။ အသုံးပြုသူသည်သင်ပြုသည့်အရာနှင့်သက်ဆိုင်သောသတ်သတ်မှတ်မှတ်သော့ချက်စာလုံးကိုဂူးဂဲလ်တွင်ရှာဖွေသောအခါသင်၏ဆိုက်သည်ပထမဆုံးရရှိသောရလဒ်များမှပေါ်လာလိမ့်မည်။
SEM - လက်ရှိအသုံးအများဆုံးအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ - Google Advertising ကဲ့သို့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များပေါ်တွင်ကြော်ငြာခြင်းကိုလှည့်ပတ်သည်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏ရရှိနိုင်သည့်ရန်ပုံငွေများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်မှန်ကန်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးပါဝင်သည်; ဤနည်းဗျူဟာ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအဓိကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၏ကမကထပြုထားသောရလဒ်များတွင်ပေါ်လာရန်ဖြစ်သည်။
SEM မှရရှိသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်ယခုအချိန်တွင်လက်ရှိစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုလမ်းကြောင်းနှင့်လိုက်ဖက်ညီသည်။ သို့သော်အချို့သောအခြေအနေများတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်နိုင်သည်။
အင်္ဂလိပ်ဝဘ်ဆိုက် SEO (Search Engines Optimization) သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်အသုံးပြုသောဝက်ဘ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးကိုရည်ညွှန်းသည် site တစ်ခု၏ positioning ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်များအတွက်။ အော်ဂဲနစ်ရလဒ်များသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှပေးထားသော“ အခမဲ့ရလဒ်များ” ဖြစ်ပြီးထောက်ပံ့သောရလဒ်များနှင့်မတူသည်။ ဂူဂဲလ်တွင်သင်ရှာဖွေသောအခါ၊ အဝါရောင် "အန်း" ကိုထည့်လိုက်သည့်အခါကမကထပြုထားသောရလဒ်များကိုသင်ခွဲခြားနိုင်သည်။ လက်မှတ်ထိုး ကမကထပြု vs vs အော်ဂဲနစ်ရလဒ်များကို၏ဥပမာ။
"Ann" ဟူသောစကားလုံးမပါရှိသည့်ရလဒ်အားလုံး။ အဝါရောင်တွင်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလာဒ်များဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင့်လျော်သော SEO စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်သင်၏ site ပေါ်လာနိုင်သည့်ရလဒ်များကိုဆိုလိုသည်။
ပေးဆောင်ရသောရှာဖွေခြင်းကြော်ငြာသို့မဟုတ် pay-per-click စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်ယနေ့ SEM (Search Engines Marketing) ၏ဆိုလိုချက်ဖြစ်သည်။ နာမည်ကအကြံပြုထားသည့်အတိုင်း၎င်းသည်၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့အသွားအလာရရှိရန်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုပေးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏ရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီစေသည် များသောအားဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ထိုအခါကြော်ငြာရှင်သည်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်တစ် ဦး သည်ကြော်ငြာကိုနှိပ်သည့်အချိန်တိုင်းအတွက်ပေးချေရပါလိမ့်မည်။ ဤနည်းပညာများကိုမတူညီသောအခြေအနေများတွင်သုံးနိုင်သည်။ Facebook Ads တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမှသည် Google AdWords ကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော်မူလ SEM အတိုကောက် SEM ၏အဓိပ္ပာယ်မှာပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအဓိပ္ပာယ်ရှိပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်ကိုက်ညီသည် - ကွန်ရက်စာမျက်နှာသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၌အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများကိုညွှန်ပြသည်။ စာသားအရအမှန်မှာ "ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး" ဆိုသည်မှာ "ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များပေါ်တွင်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း" ကိုဆိုလိုသည်။ အော်ဂဲနစ်တည်နေရာနည်းဗျူဟာများ (SEO) နှင့်ပေးဆောင်ရသောကြော်ငြာမဟာဗျူဟာများပါ ၀ င်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ယနေ့ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်ကိုအပေါ်ယူ!
seo နှင့် sem မှဘာအကျိုးကျေးဇူးများရနိုင်မလဲ။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည် SEO နှင့် SEM အကြားကွဲပြားခြားနားမှုကိုအဓိကထားပြီး၊ မဟာဗျူဟာနှစ်ခုစလုံးသည်အရောင်းတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သောထပ်မံလည်ပတ်မှုများကိုဆွဲဆောင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာမည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုမဆိုလိုချင်သောအရာသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်အကျိုးအမြတ်ပိုမိုရရှိစေသည်။ SEO နှင့် SEM သည်ဤလုပ်ငန်းတွင်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
SEO သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှတိကျမှန်ကန်သောစာဖြင့်ရေးသားခြင်း၊ အရည်အချင်းပုံစံချခြင်းနှင့်လိမ္မာပါးနပ်သောချိတ်ဆက်မှုတည်ဆောက်ခြင်းမဟာဗျူဟာများအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ အဝင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်၏အခြေခံကျသောအချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ site ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အကြောင်းအရာများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်သည် ။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏တာ ၀ န်သည်အသုံးပြုသူများအားသူတို့ရှာဖွေမှု၏အသင့်တော်ဆုံးရလာဒ်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့်ရှင်းလင်းသောအညွှန်းပါသောကွန်ရက်စာမျက်နှာများကိုမျက်နှာသာပေးလေ့ရှိပြီးကောင်းမွန်သောချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ရက်များနှင့် visitors ည့်သည်များအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုကောင်းစွာမီးမောင်းထိုးပြသည်။ အကောင်းဆုံး SEO နည်းစနစ်သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုသော့ချက်ကျသောသော့ချက်တစ်ခုအတွက်အော်ဂဲနစ်ရလဒ်များတွင်ထိပ်ဆုံးနေရာများသို့ရောက်စေနိုင်သည်။
စပွန်ဆာပေးသောကြော်ငြာများကိုဝယ်ယူရန် SEM သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ရန်ပုံငွေများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။ ၎င်းသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးမြန်ဆန်သောမြှင့်တင်မှုအပေါ်အခြေခံသည် နှင့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များကသူတို့ရှာဖွေမှုများတွင်ထည့်ရန်ပိုများသောသော့ချက်စာလုံးများကိုအာရုံစိုက်သည်။ ပေးဆောင်ရသည့်ရှာဖွေရေးစျေးကွက်၏အားသာချက်တစ်ခုမှာ၎င်း၏တိုက်ရိုက်သဘောသဘာဝပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားသုံးစွဲသူများ၏အာရုံကိုဖမ်းယူရန်အထူးသဖြင့်ထင်ရှားသောမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပို့ပေးသည်။ ကြော်ငြာကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့သည်သင်၏ site ၏စာမျက်နှာတစ်ခုသို့ညွှန်ကြားလိမ့်မည်။ ပြောင်းလဲမှုနှုန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌, က variable တွေကိုအများအပြားဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့်ဤအချက်အလက်များကိုအများကြီးအတက်အကျစေနိုင်သောကြောင့်, တူညီတဲ့အသွားအလာများအတွက်ရောင်းအားသာ။ ကြီးမြတ်အရေအတွက်ကထုတ်လုပ်နှစ်ခုမဟာဗျူဟာများထဲမှတစ်ခုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောမဟုတ်ပါဘူး။
SEO သို့မဟုတ် SEM နည်းဗျူဟာ - မည်သည့်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ SEO အေဂျင်စီသည်ခေါင်းစဉ်မည်မျှကျယ်ပြန့်သည်ကိုသိရှိပြီး၎င်းသည်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုထိုက်သင့်ကြောင်းလည်းသိသည်။ ၎င်းကိုလုံးဝဆိုင်းငံ့ထားရန်မလိုပါ၊ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုထက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုထက် ဦး တည်သောအချက်များမှာများပြားလှသည်၊ အဓိကအားဖြင့်ကုမ္ပဏီအတွက်ရရှိနိုင်သည့်ဘတ်ဂျက်နှင့်ရလဒ်ကိုမြင်ရန်မျှော်လင့်ရသောအချိန်ကာလအတိုင်းအတာ။
SEO နှင့် SEM: ROI
SEM နည်းဗျူဟာဖြင့် ROI ကိုချက်ချင်းရရှိလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည် level X သို့မြင့်တက်သွားပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်လျှောက်လုံးအကြမ်းအားဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေလိမ့်မည်။ SEO မဟာဗျူဟာဖြင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းအလားတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အနည်းငယ်သာထင်ရှားသောအမြတ်အစွန်းရရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်မြင့်တက်သောပုံဥပမာတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကြီးထွားလာလိမ့်မည်။ ကြော်ငြာခြင်းကိုပြီးဆုံးသည်နှင့် SEM ၏အမြတ်အစွန်းသည်ရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်ဟုလည်းသတိပြုသင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်၏ ၀ င်ငွေသည်သုညနှင့်ညီမျှလိမ့်မည်။ သို့သော် SEO ၏အမြတ်အစွန်းသည်ကြီးထွားမှုကိုရပ်တန့်သွားစေသော်လည်းအဆက်မပြတ်အဆက်မပြတ်ရှိနေလိမ့်မည် စစ်ဆင်ရေး။ နားလည်ရန်ရှုပ်ထွေး? စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဥပမာတစ်ခုလာပါ။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်ဘတ်ဂျက်ငွေ ၃၀၀၀ ရှိပြီး SEO အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏သီအိုရီအမြတ်အစွန်းကို SEM တွင်နှိုင်းယှဉ်လိုသည်ဆိုပါစို့။ SEM မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကနေစကြရအောင်။ စုစုပေါင်းဘတ်ဂျက် ၃၀၀၀ ဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့စဉ်တန်ဖိုး ၁၀၀ ကြော်ငြာတန်ဖိုးသတ်မှတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးသည်ရက်ပေါင်း ၃၀ (ရက်ပေါင်းသုံးဆယ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကန ဦး ဘတ်ဂျက်ကုန်သွားသည်) ဖြစ်သည်။ ယခုတွင်ပျမ်းမျှ CPC ၀.၄၀ ဖြစ်သောကြောင့် (သင်လက်တွေ့ကျကျ CPC တန်ဖိုးနှင့်အခြားဥပမာများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ပစ္စည်းသည်ကွဲပြားသည်မဟုတ်ပါ) ကင်ပိန်းနေ့၏နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည့်လည်ပတ်မှုများသည် ၂၅၀ နှင့်ညီမျှလိမ့်မည် (ဆိုလိုသည်မှာ ၁၀၀/0.40) ။ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်လည်ပတ်မှုပေါင်း ၇,၅၀၀ ခန့်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ဤကာလ၏အဆုံးတွင်ကြော်ငြာတွင်ခွဲဝေချထားပေးမည့်ဘတ်ဂျက်ကုန်သွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့၏ PPC စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည်ရပ်စဲသွားပြီးမည်သည့်ကလစ်သို့မဟုတ်မည်သည့်လည်ပတ်မှုကိုမျှမပြုလုပ်တော့ပါ။ ထို့ကြောင့်ဤမဟာဗျူဟာ၏အမြတ်အစွန်းကိုဤအချိန်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအတွင်းရရှိသောရလဒ်များအားဖြင့်တိုင်းတာနိုင်သည်။
SEO ဆိုသည်မှာ: ROI
ခင်ဗျားတို့ဟာ SEO တစ်ခုတည်းမှာပဲဘတ်ဂျက် ၃၀၀၀ ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားတယ်ဆိုပါစို့။ ပထမဆုံးလအနည်းငယ်လှုပ်ရှားမှုတွင် SEO site မှချက်ချင်းအပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များရစေသည့်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ၏အဆင့်သည်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာလိမ့်မည်။ အပြိုင်အဆိုင်အရှိဆုံးသော့ချက်စာလုံးများအတွက်အဆင့် ၁၀၀ မှ ၅ သို့ (ဆိုလိုသည်မှာ ၄၁ နှင့် ၅၀ အကြား) ရှိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည့်စုစုပေါင်းလည်ပတ်မှုများသည်အလွန်နည်းနေလိမ့်မည်။ အော်ဂဲနစ်ရလဒ်များ၏ဒုတိယစာမျက်နှာထက်ကျော်လွန်သော site သည်အသွားအလာနီးပါးနီးပါးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂူဂဲလ်၏ထိပ်ဆုံးနေရာ ၁၀ ခုအနက်တစ်ခုသို့ရောက်ရှိသည့်အခါစစ်မှန်သောရလဒ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ပို။ ပင်, ကျနော်တို့ထိပ်တန်း3ရာထူးတ ဦး တည်းရောက်ရှိသည့်အခါ။ သို့သော်ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်များသောအားဖြင့်ရက်ပေါင်း ၃၀ လှုပ်ရှားမှုမလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လပေါင်းများစွာမဟာဗျူဟာများ၊ စမ်းသပ်မှုများနှင့်ပင်ကိုယ်မူလအကဲဖြတ်မှုများအတွက်လိုအပ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် SEO ဗျူဟာများသည်နေ့စဉ်ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ (ကျွန်ုပ်တို့ SEM တွင်တစ်ရက်လျှင် ၁၀၀ ကဲ့သို့)၊ သို့သော်လစဉ်ကုန်ကျမှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာတွင်လစဉ်ကြေးသည်တစ်လလျှင် ၅၀၀ ခန့်ဖြစ်ပြီးကန ဦး ဘတ်ဂျက် ၃၀၀၀ သည် SEO လုပ်ငန်းအတွက် ၆ လခန့်ကြာနိုင်သည်။
SEO နှင့် SEM: ROI နှိုင်းယှဉ်
လှုပ်ရှားမှုပထမလ၏အဆုံးတွင် SEM စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများမှတဆင့်ရရှိသောလည်ပတ်မှုများသည် SEO စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမှရရှိသောထပ်တိုးနှုန်းများထက်သိသိသာသာပိုမိုများပြားလိမ့်မည်။ သို့သော် SEO ၏စစ်မှန်သောအမြတ်အစွန်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဤမဟာဗျူဟာတွင်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုလုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ သစ်သီး တကယ်တော့ကန ဦး ဘတ်ဂျက်ကုန်သွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် (၆ လအကြာတွင်ဥပမာတွင်) ကျွန်ုပ်တို့၏ site ၏အဆင့်သည်ကန ဦး အဆင့်သို့ပြန်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၊ အဆုံးသတ်တွင်လအနည်းငယ်အတွင်းတူညီသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မည်။ ဆဌမလ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမ ဦး ဆုံးဘတ်ဂျက်ကို SEM တွင်သုံးစွဲခြင်းအားဖြင့်၊ ၆ လအကုန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်မည်မျှလည်ပတ်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်မည်မျှရောင်းချမည်ကိုအတိအကျသိလိမ့်မည်။ သို့သော်၊ SEO တွင်အလားတူအသုံးစရိတ်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအပြီးတွင်လနှင့်လများစွာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်ရလဒ်များကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် SEO နှင့် SEM အကြားရွေးချယ်မှု၏အဓိကမောင်းနှင်အားတစ်ခုမှာကုမ္ပဏီ၏ဘတ်ဂျက်ရရှိနိုင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ရည်မှန်းချက်များပြည့်မီရန်အချိန်ကာလတစ်ခုလုံးအထက်တွင်ရှိသည်။
ရည်မှန်းချက်သည်တိုတောင်းသောသို့မဟုတ်တိုတောင်းသောကာလတိုဖြစ်ပါကအဖြေမှာ SEM ဖြစ်သည်။ ရည်မှန်းချက်သည်အလယ်အလတ်နှင့်ရေရှည်ဖြစ်ပါကအဖြေမှာ SEO ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်ဘတ်ဂျက်ကိုခွင့်ပြုပါကရေတိုတွင်ရေရှည်တွင်မြင့်မားသော ROI ကိုသေချာစေရန်အတွက်တိုတောင်းသောကာလနှင့်သိသာထင်ရှားသည့်ရလဒ်များကိုရရှိရန် SEM လှုပ်ရှားမှုများကိုပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးသောဖြေရှင်းချက်မှာ SEO နှင့် SEM တို့ကိုပေါင်းစပ်။ ပေါင်းစပ်ထားသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်စီမံခန့်ခွဲသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုစီစဉ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပြောင်းလဲပြီး SEM ၏အမြန်နှုန်းကိုကာလတိုနှင့်အမြင့်ဆုံးတွင် SEO ၏မြင့်မားသော ROI နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အသုံးအနှုန်း - အင်အားစုများအားဖြင့်ပေါင်းစည်းခြင်းအားဖြင့်နည်းစနစ်တစ်ခုစီ၏စွမ်းအားကိုတိုးမြှင့်ပြီးအောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းများသိသိသာသာကြီးလိမ့်မည်ဟူသည့်အချက်ကိုပြောစရာမလိုပါ။
၀ င်ငွေတိုးလာခြင်း၊ click-through နှုန်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကို SEO နှင့် SEM စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများတွင်ပါ ၀ င်သောအမျိုးမျိုးသောဆော့ဖ်ဝဲများ၏အကူအညီဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ နာမည်ကျော် Google Analytics အပြင် ၀ င်းဒိုးအတွက် Web CEO Professional Suite ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြနိုင်သည်။ နေ့တိုင်းလူသစ်များကိုစျေးကွက်တွင်မိတ်ဆက်ပေးသည်၊ ၎င်းသည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုသတိပေးနှိမ်နင်းမှုများနှင့်ပါထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည် နှိုင်းယှဉ်ကိရိယာများ။
ပြည်တွင်း၌ VS Outsourcing ကိုကျွန်ုပ်တို့ကောင်းမွန်စွာစီမံနိုင်လျှင် SEO နှင့် SEM သည်သင်၏စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုကိုထူးခြားစေနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ကြသည်။ ဤနည်းစနစ်နှစ်ခုလုံးကို အခြေခံ၍ ကောင်းမွန်စွာလေ့လာပြီးသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာသည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပင်အထောက်အကူပြုနိုင်ပြီးသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့အသွားအလာအသစ်များသယ်ဆောင်လာခြင်းဖြင့်ရောင်းအားနှင့်ပြောင်းလဲမှုနှုန်းကိုတိုးပွားစေသည်။
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၊ ဤအရာအားလုံးသည်အင်တာနက်ကိုသာ ကျေးဇူးတင်၍ ၀ ယ်ယူသူအသစ်များကိုရရှိစေလိမ့်မည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ဤကိရိယာများကိုစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းခြင်းကသင့်ကုမ္ပဏီအားမကောင်းသောအလင်းရောင်ရောက်စေရန်ပင်အချိန်၊ အရင်းအနှီးနှင့်စွမ်းအင်ကိုဖြုန်းတီးစေသည်။ ထို့နောက်သင်၏အရင်းအမြစ်များနှင့်သင်၏ဘတ်ဂျက်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ၊ သင်၏ SEO နှင့် SEM ကိုအိမ်တွင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်တတိယပါတီများသို့အပ်နှံသင့်မသင့်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
ပထမကိစ္စတွင်အားသာချက်တစ်ခုမှာသင်၏ကုမ္ပဏီ၏ကြော်ငြာတွင်အမြဲတမ်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပါ ၀ င်ပါလိမ့်မည်။ သင်နှင့်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများသည်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်လစာပေးသောရှာဖွေရေးစျေးကွက်နှင့်ပတ်သက်သောမဟာဗျူဟာများကိုလွတ်လပ်စွာစီမံနိုင်သည်။
သင်၏အွန်လိုင်းစျေးကွက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုအား SEO အေဂျင်စီသို့အပ်နှင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ပြင်ပ SEO ကုမ္ပဏီများအားအပ်နှင်းခြင်းသည်ကုမ္ပဏီအများစု၏ ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပြီးအချိန်ကုန်သက်သာစေပြီးအချိန်ကုန်သက်သာစေနိုင်သည်။ ထိရောက်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာသည်ပထမအဆင့်မှမြင်သာထင်သာရှိသောရလဒ်များကိုပေးသည်။ သို့သော်ရေရှည်တွင်အကြီးမြတ်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိလိမ့်မည်။ ကဏ္ specialists အထူးကုများသည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအသစ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဆန်းစစ်ရန်ပြင်ဆင်ထားသည်။ စျေးကွက်နှင့်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအချက်အလက်များကိုသေချာစွာတိုင်းတာမှုမှ စတင်၍ ၎င်းတို့သည်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကိုသင့်အားအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးပြီးသင်၏စီးပွားရေးကိုကွန်ယက်ပေါ်တွင်သာမကယေဘုယျအားဖြင့်စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးနေရာချထားမှုကိုအာမခံသည်။
အမှန်စင်စစ်သတင်းကောင်းသည်မည်သည့်ကုမ္ပဏီ၊ မည်သည့်အရွယ်အစားရှိပါစေ SEO နှင့် SEM မှအမြတ်ထုတ်နိုင်သည်။ မြှင့်တင်ခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါကမည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်မှုတွင်မဆိုကုန်ကျစရိတ်ရှိပြီး၎င်းကိုကတိက ၀ တ်သို့မဟုတ်အမှန်တကယ်ဘဏ္outာရေးအသုံးစရိတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ နားလည်ထားရန်လည်းလိုအပ်သည်။ အဓိကအချက်ကဒီဂိမ်းကိုဖယောင်းတိုင်နဲ့ထိုက်တန်အောင်လုပ်ဖို့ပါ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကောင်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့ဖြုန်းတီးတာကမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည့်ငွေပမာဏနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘာမျှမဟုတ်ပါ။
ဤဆောင်းပါး၌ရှုပ်ထွေးသောကိစ္စရပ်များအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးယင်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောကျွမ်းကျင်မှုရရှိရန်မလွယ်ကူပါ။ သို့သျောလညျးအကြှနျုပျတို့သညျ၏အရေးပါမှုကိုသိရှိစေပြီမျှော်လင့်ပါတယ် သင့်ကုမ္ပဏီအတွက်ထိရောက်သော SEM နှင့် SEO နည်းဗျူဟာများရှိခြင်း။ ထိုသို့ဖြစ်ပါကသင်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်အသင့်တော်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီနိုင်မည့်သင့်ဘက်မှလက်တွဲဖော်တစ်ယောက်ရှိလိုလျှင်၊ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ။ Semalt ကျွမ်းကျင်သူများကအမှားအများစုကိုရှောင်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။